inguqulelo 0.3.8 – Detection ulwimi
EtiMnga 20, 2009 ngokuthi umnikelo Shiya Comment
Le nguqulelo wongezelela ekufumanekeni iilwimi ngenxa website iindwendwe (esekelwe umkhangeli thethwano – geoip zingadityaniswa ukuba inzala ngokwaneleyo ezizakuboniswa). Kwakhona ikwaxhasa omtsha `irel = canonical` kwi Wordpress entsha (2.9) leyo wakhululwa izolo. Isabelo ngokwesiqhelo iimpukcuko iponti nazo apha. Wabuya sifuna ukubulela kevin Hart uncedo lwakhe.
Olu luguqulelo lokugqibela ukuxhasa ngokusemthethweni Wordpress 2.7, njengoko besiya Ndikhetha ukuchitha imithombo yethu umda uphuculo kunokuba ekuxhaseni isiseko endala ikhowudi. Kuba nabani usebenzisa Wordpress endala kufuneka iingcebiso ezimbini: 1. uphuculo. okanye 2. Ungasebenzisa ukukhululwa transposh endala. Isicwangciso ngekamva kuya kufana, kanye Wordpress 3.0 kuya kuphuma siya zivuze inkxaso 2.8. Naziphi na izimvo oku kuya kwamkelwa.
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release ephawulweyo Nge: engephi, khulula, rss, Wordpress 2.8, Wordpress 2.9, Java Wordpress